Madaxweyne Joe Biden oo isaga oo Ilmeenaya la hadlay Taageerayaashiisa (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home NEWS Madaxweyne Joe Biden oo isaga oo Ilmeenaya la hadlay Taageerayaashiisa (Sawirro)
Madaxweyne Joe Biden oo isaga oo Ilmeenaya la hadlay Taageerayaashiisa (Sawirro)
Waxaa maanta lagu wadaa in xarunta Aqalka cad ee dalka Mareykanka ka dhacdo munaasabad balaaran uu xilka kula wareegayo laguna dhaarinayo Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden.
Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa shalay galab soo gaaray magaaladan Washington ee caasimada dalka Mareykanka , waxa uuna maanta si rasmi ah loogu caleemo saarayaa xilka Madaxweynaha Mareykanka.
Biden ayaa inta uusan kasoo bixin gobolka laga soo doorto ee Delaware, khudbad qiiro laheyd kasoo jeediyay xarun ay ciidamada Ilaalada Qaranka ku leeyihiin Delaware, halkaas oo loogu magacdaray wiilkiisa Beau Biden.
Isaga oo ilmada ceshanaya dareenkiisana uu is badalay ayuu Madaxweyne Joe Biden u sheegay dadka gobolkiisa “Inuu mar walba ahaan doono kuna faani doono wiil kasoo jeeda gobolka Delaware,”
Biden ayaa noqon doona madaxweynaha 46-aad ee uu yeesho Mareykanka. Waxaa madaxweyne ku xigeen u ah haweeneey lagu magacaabo Kamala Harris. Waxay noqon doontaa haweeneydi ugu horreysay ee noqota madaxweyne ku xigeenka Mareykanka .
Previous articleEyes on Djibouti in Somalia and Kenya peace deal The East African
Next articleTrump oo xayiraad kusoo rogay Saraakiil u dhalatay Tanzaniya kahor inta uusan xilka wareejin